Family Guy Waa TV show ah oo aad loo jecel yahay oo la jecel yahay by fasalada iyo tacsida ah. IGT gaaray show oo ka kooban kulankaan Afyare a kaas oo uu si wanaagsan u helo ciyaartoyda. ciyaartoyda ayaa la socday Gaga badan ciyaarta booska this. Waxay soo bandhigaysaa ciyaartoyda qaar ka mid ah muuqaalada ugu xiiso leh iyo guul weyn.
Family Guy waxaa lagu horumariyaa by aabbe weyn dunida ciyaaraha ah, IGT. IGT ama International ay ciyaareyso ay Technology waa mid ka mid ah horumarinta online ugu caansan ciyaarta Afyare. IGT waxaa hore loo yaqaan Gtech S.p.A iyo Lottomatica S.p.A. Waa sameeysa a caalamiga kulan la xaruntiisu tahay magaalada London iyo xafiisyada waaweyn ee ku yaala Rome, Las Vegas iyo Providence.
Sannaddii 2015, Shirkadda this wareegay International ay ciyaareyso ay Technology oo qaatay magaca shirkadda this.
Family Guy qaadataa ciyaartoyda Safar ah oo ay la socdaan saaxiibo magacaabayo Brian, Peter, Lois, Chris, Stewie, Meg iyo saaxiibadood. Waxay leedahay shan iyo soddon duntu paylines. Waxaa oo dhan ku saabsan xiiso leh, madadaalo iyo lacag.
calaamadaha waxaa ka mid ah oo dhan characters ka Family Griffin ah. calaamadaha kale waxaa ka mid baxno, Joe Swanson iyo Cleveland.
theme ee booska uu yahay mid aad u xiiso badan. IGT uu qabtay shaqo aad u weyn marka la eego naqshadaynta. animations waa gabi ahaanba ku cakistay. Ciyaartoyda kuwaas oo horey u ogyahay show TV aqoonsan lahaa codkooda iyo dhawaaqyada. ciyaarta booska waxay bixisaa gunno badan oo cajiib ah in ciyaartoyda. Waxaa jira wax badan oo wareeg bonus, laablaabi iyo dhigeeysa oo lacag la'aan ah kulankaan madadaalo. Astaamahani waa siin ciyaaryahanka fursad si ay u weyn oo kale oo ay leeyihiin xaddi weyn oo xiiso leh.
Ciyaartoyda ka heli doontaa qaababka sida la yaabka leh Guy Wilds, Feature Bonus Adduunka, The Bonus sakhraansan dagan, Chicken Bonus Dagaallami, Lois 'Hot Free dhigeeysa Bonus, Feature Butros, Stewie ee Feature, Feature Brian iyo Lois 'Feature. Tilmaamo Kuwan oo dhammu waa arrin xiiso leh iyo caawin ciyaaryahanka by aadamiga iyo soohdin si ay u buuxiyaan uu bangiga la abaalmarino lacag caddaan ah oo dhab ah.
Family Guy waa ciyaar la sharciyo fudud. Waxaa jira ku filan of sifooyinka in ay sii xiiso leh iyo sidoo kale aad u qaali ah. Waa waa in ciyaaro ciyaartoyda raadinaya fudud ah- ciyaarta Breezy oo xiiso leh.